ပုသိမ်​ – မုံရွာကားလမ်း​ ရေတိုက်​စား၍ ကတ္တရာ လမ်း​ကျောပြတ် – WunYan
မ​ကွေးတိုင်း​ဒေသကြီး စလင်းမြို့နယ်​ ကန်​ပြား​ကျေးရွာ မှ ၂ ဖာလုံခန့်​အကွာ ပုသိမ်​မုံရွာ အ​ဝေး​ပြေးကားလမ်း မိုင်​တိုင်​ ၁/၃၁၁ နှင့်​ ၂/၃၁၁. ၃၁၄ ​နေရာ ကတ္တရာ လမ်းသည်​ ဇွန်​လ ၁၂ ရက်​​နေ့ ည​နေ သုံးနာရီခွဲ့ ခန့်​က စလင်းမြို့နယ်​တွင်​ အဆက်​မပြတ်​ ရွာသွန်း​နေ​သော မိုး​ကြောင့်​ရေများတိုက်​စားပြီး ​ပေ ၂၀ ခန့်​ စတင်​ ပျက်​စီးခဲ့သည်​။
အဆိုပါ ကတ္တရာလမ်း​ ရေတိုက်​စာ၍ ကားလမ်းပြတ်​ ပျက်​စီးသည်​ကို သိလျင်​သိခြင်း စလင်းမြို့နယ်​​ ဆောက်​လုပ်​​ရေး ဦးစီးဌာနမှ SAE ​ဒေါ်သက်​နှင်းဝါနှင့်​ အဖွဲ့ မှ သွားရောက်​၍ ခရီးသွားယာဉ်​များ အန္တရာယ်​ မဖြစ်​​ရေးအတွက်​ ကြိုတင်​ကာကွယ်​​ရေး လုပ်​ငန်းများ လုပ်​​ဆောင်​​ပေးခဲ့သည်​ ။
အဆိုပါ ကားလမ်းမှ မိုး​ရေများ ဆက်​တိုက်​ တိုက်​စား​နေမှု့ကြောင့်​ ​ပေ ၅၀ ခန့်ကတ္တရာလမ်းများ ပိုင်းပြတ်​သွားခဲ့ရာ လမ်းပန်းဆက်​သွယ်​​ရေး မပြတ်​​တောက်​​စေရန်​ ​ဆောက်​လုပ်​​ရေးလုပ်​ငန်း ဦးစီးဌာနမှ အချိန်​နှင့်​ တ​ပြေးညီ ပြုပြင်​သွားမည်​ဖြစ်​​ကြောင်း သိရသည်​။
ပုသိမျ​ – မုံရှာကားလမျး​ ရတေိုကျ​စား၍ ကတ်တရာ လမျး​ကြောပွတျ​
မ​ကှေးတိုငျး​ဒသေကွီး စလငျးမွို့နယျ​ ကနျ​ပွား​ကြေးရှာ မှ ၂ ဖာလုံခနျ့​အကှာ ပုသိမျ​မုံရှာ အ​ဝေး​ပွေးကားလမျး မိုငျ​တိုငျ​ ၁/၃၁၁ နှငျ့​ ၂/၃၁၁. ၃၁၄ ​နရော ကတ်တရာ လမျးသညျ​ ဇှနျ​လ ၁၂ ရကျ​​နေ့ ည​နေ သုံးနာရီခှဲ့ ခနျ့​က စလငျးမွို့နယျ​တှငျ​ အဆကျ​မပွတျ​ ရှာသှနျး​နေ​သော မိုး​ကွောငျ့​ရမြေားတိုကျ​စားပွီး ​ပေ ၂၀ ခနျ့​ စတငျ​ ပကျြ​စီးခဲ့သညျ​။
အဆိုပါ ကတ်တရာလမျး​ ရတေိုကျ​စာ၍ ကားလမျးပွတျ​ ပကျြ​စီးသညျ​ကို သိလငျြ​သိခွငျး စလငျးမွို့နယျ​​ ဆောကျ​လုပျ​​ရေး ဦးစီးဌာနမှ SAE ​ဒျေါသကျ​နှငျးဝါနှငျ့​ အဖှဲ့ မှ သှားရောကျ​၍ ခရီးသှားယာဉျ​မြား အန်တရာယျ​ မဖွဈ​​ရေးအတှကျ​ ကွိုတငျ​ကာကှယျ​​ရေး လုပျ​ငနျးမြား လုပျ​​ဆောငျ​​ပေးခဲ့သညျ​ ။
အဆိုပါ ကားလမျးမှ မိုး​ရမြေား ဆကျ​တိုကျ​ တိုကျ​စား​နမှေု့ကွောငျ့​ ​ပေ ၅၀ ခနျ့ကတ်တရာလမျးမြား ပိုငျးပွတျ​သှားခဲ့ရာ လမျးပနျးဆကျ​သှယျ​​ရေး မပွတျ​​တောကျ​​စရေနျ​ ​ဆောကျ​လုပျ​​ရေးလုပျ​ငနျး ဦးစီးဌာနမှ အခြိနျ​နှငျ့​ တ​ပွေးညီ ပွုပွငျ​သှားမညျ​ဖွဈ​​ကွောငျး သိရသညျ​။